Lakefront City Retreat - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDonna
KwiLake Loon phakathi kwesixeko. Le ndlu ikumgangatho wegadi, iqaqambile, kwaye ivulekile. Ikwinqanaba elisezantsi lekhaya lam kwaye izimele ngomnyango wabucala. Yimizuzu eli-15 kuphela ukuya edolophini iHalifax, kwaye ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukuya eBurnside, eDartmouth Crossing, kunye nonxweme lolwandle. Ungonwabela idokhi, ukuqubha, ukukhwela inqanawa, kunye nokubukela ukutshona kwelanga! Iintyatyambo kunye neegadi zemifuno ezininzi ngaphandle komnyango wakho. Ilungele izibini, abahambi bebodwa, abahambi beshishini, kunye neentsapho.
Indawo yokuhlala inomnyango wabucala. Iphangalele ngengqiqo evulekileyo. IkwiLake Loon eDartmouth, ngaphandle nje kweMain St (Hwy 107). Kukho ukukhanya okuninzi kunye neefestile ezininzi kwiindawo zokuhlanganisana. Imigangatho yenziwe ngekonkrithi ekhazimlisiweyo ngokufudumeza umgangatho ukuyigcina ipholile.
Idekhi kunye nokungena kwisuite ibekwe kwicala elahlukileyo lendlu ukusuka apho indawo yam yokungena kunye nedekhi ikhona, ke nangona sikwindlu enye, kukho iindawo ezininzi zabucala.
Le ndlu inkulu, inendawo yokutyela, indawo yeTV ene-40" flatscreen, i-cocktail station, indawo yelanga, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala, kunye nenye indawo eyahlukileyo enokusetyenziswa njengendawo yokulala eyongezelelweyo. Inebhedi yesofa ye-futon engeyonxalenye yendawo yokuhlala/yendibano, kodwa singakwazi ukuphinda usongelwe kwisofa ukuba uyathanda.
Igumbi lokulala linebhedi esemgangathweni yomqhaphu kunye ne-down duvet. Kwikhabhathi uya kufumana i-airbed enempompo ukuba ufuna ukulala okongezelelekileyo.
Ikhitshi ibekwe kakuhle kwaye inayo yonke into oyifunayo. Ikofu, iti, iS&P, njl.njl zonke ziya kubakho. Izixhobo ezisisiseko nazo.
Kukwakho nesitishi se-cocktail esifakwe ngokupheleleyo ukuba ukonwabele. BYOB kunjalo. :) (utywala abuqukwanga)
Igumbi lokuhlambela liya kuba neetawuli, ishampu, isomisi seenwele, isepha, kunye nezinto ezincinci ezahlukeneyo onokuthi uzifune njengezixhobo zebhendi, ibhrashi yamazinyo eyongezelelweyo, iingcebiso ze-Q, iincakuba, njl.
4.97 · Izimvo eziyi-97
Isitalato yindawo ethe cwaka ye-cut-de-sac ehamba ecaleni kwechibi. Ime nje kufuphi ne-Main St (Hwy 107), enevenkile yegrosari, ivenkile yokutyela iThe Vines Pasta Grill, isikhululo segesi esineTim Horton's, kunye neGateway Meats eyaziwayo ekuhlaleni enamaxabiso aphambeneyo entengiso! Konke oku kungaphakathi kohambo olufutshane.
Ndicinga ukuba abantu bayabuthanda ubumfihlo babo, ke ndiza kulandela ukhokelo lwakho ukuya kuthi ga ekuqhubeni unxibelelwano. Ukuba wonwabile ukuba uzigcinele ngokwakho, ndiyifumana ngokupheleleyo loo nto. Isitshixo siyakushiyelwa ukuze uzijonge. Ndihlala kwigumbi eliphezulu kwaye ndiza kuba khona ngobusuku beveki kunye neempelaveki ukuba ufuna naluphi na uncedo. Ndiyakwazi ukufumaneka ngetekisi kwaye ndiya kuphendula nayiphi na imibuzo ngokukhawuleza.
Ndicinga ukuba abantu bayabuthanda ubumfihlo babo, ke ndiza kulandela ukhokelo lwakho ukuya kuthi ga ekuqhubeni unxibelelwano. Ukuba wonwabile ukuba uzigcinele ngokwakho, ndiyifuma…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dartmouth